Alfonso de Frutos | | LG, hevitra, SmartWatch
Nandritra ny andiany farany an'ny IFA tany Berlin, ireo mpanamboatra lehibe dia nampiseho ny famantaranandron-dry zareo, fitaovana izay nanjary lamaody bebe kokoa. Motorola sy LG dia niavaka tamin'ny azy ireo Moto 360 sy LG G Watch R, smartwatches roa izay niavaka tamin'ny dial boribory sy ny kalitaon'ny famaranana.
Tamin'ny fotoana nanararaotra namakafaka tsara ny famantaranandro Motorola izahay, fitaovana iray misy endrika mahaliana tokoa, saingy nanota tamin'ny lafiny sasany, indrindra ny faharetan'ny bateria. Ankehitriny dia anjaran'ny smartwatch an'ny kintana LG ka mandroso isika hamakafaka ny LG G Watch R, ny smartwatch tsara indrindra eny an-tsena?
1 Famolavolana tsara sy famaranana kalitao
2 Toetra mampiavaka ny LG G Watch R
Famolavolana tsara sy famaranana kalitao
Hanomboka ity famakafakana ny LG G Watch R miresaka momba ny endriny ity isika, iray amin'ireo teboka manandanja indrindra amin'ny famantaranandro. Miaraka amin'ny Lanja 62 grama, Mahafinaritra ny mitafy ilay fitaovana ary misy antsipiriany tianay: ny hateviny.
El LG G Watch R dia mahia noho ny Moto 360 avy amin'ny fijerin'ny famantaranandro mahazatra, tsy manana an'io hulk io izay atolotry ny smartwatch an'i Motorola. Ny hany nefa hitantsika dia ny endriny mazava tsara masculine, izay mety tsy hahatonga azy ho mety amin'ny mpamaky antsika. Na dia efa fantatsika fa amin'ny tsiro, ny loko.
Tonga lafatra tsotra izao ny haavon'ny G Watch R. Ny firafitry ny fiambenana dia matanjaka ary ny peratra ivelany vy dia maneho fahatsapana kalitao. Ao amin'ny fonony aoriana ihany no misy ny plastika.
Asongadino ny frame miaraka amin'ny isa, izay manome sentetika kanto izay mampanakaiky azy amin'ny famantaranandro mahazatra, ho fanampin'ny fanampiana amin'ny famakiana ny fotoana raha manana famolavolana famantaranandro mahazatra isika. Tamin'ny voalohany dia manahy aho fa hanelingelina ny traikefa ara-pahefana ny endriny, zatra manomboka amin'ny fikasihana mivantana ny sisiny, na dia ao anatin'ny fotoana fohy aza dia zatra izany ianao.
Ny iray amin'ireo tanjaky ny smartwatch dia ny tadiny. Miaraka amin'ny vita vita amin'ny hoditra avo lenta, lasa mahafinaritra be ny mikasika azy. Ho fanampin'izany, ny bandy ao amin'ny LG dia nieritreritra ny zava-drehetra tamin'ny alàlan'ny fitazonana ny dial miaraka amin'ny rafitra klasika, mba hahafahantsika manova ny tadiny tsy misy olana.
Ary tsy afaka manadino azy isika Fanamarinana IP67 izay manome ny fanoherana LG G Watch R amin'ny vovoka sy rano. Tsy hanana olana ianao raha te handro na handro amin'ny fiambenana. Raha fintinina, ny LG G Watch R dia manana endrika kanto sy kanto. Raha tianao ny famantaranandro mahazatra, ny famantaranandronan'ny mpamorona Koreana dia safidy hodinihina.
Toetra mampiavaka ny LG G Watch R
Ny Moto 360 dia nahazo tsikera marobe tamin'ny fampiasana fitaovana finday efa taloha ary amin'izao fotoana izao dia mialoha ny mpifaninana aminy i LG. Ary ny LG G Watch R dia mitempo noho ny a Processor Qualcomm Snapdragon 400 miaraka RAM 512MB.
Amin'ny lafiny teknika, ny LG G Watch R dia mihoatra ny manome ny ilain'ny Android Wear, noho izany dia ho hitanao fa misy fluidity tanteraka sy hafainganam-pandehan'ny valiny mihoatra ny ampy. Tsy misy na inona na inona hitsikera amin'izao fotoana izao. Mifanohitra tanteraka amin'izany.
Na dia nisy tara kely aza tao amin'ny Moto 360, ny ny fahaiza-mampiasa amin'ny LG G Watch R dia tonga lafatra. Tena tsikaritra indrindra izany rehefa mampandeha ny sensor ny tahan'ny fitepon'ny fo fa eo anelanelan'ny 5 sy 7 segondra ny fakana ny am-polonao, raha ao amin'ny Moto 360 kosa indraindray ianao dia tsy maintsy miandry, ary miandry mandra-panapahanao hevitra fa handray ny pulsainao, izay handeha haingana kokoa.
fepetra 46.4 x 5.6 x 9.7 mm
lanja Gramin'ny 62
efijery P-OLED boribory 1.3 santimetatra
vahaolana 320 x 320 (245dpi)
processeur Qualcomm Snapdragon 400 1.2 GHz
fitehirizana 4 GB eMMC
Sela Mpandray Hafanana 9-Axis; barometatra; pedometer; sensor amin'ny tahan'ny fo
Ok ny LG G Watch R dia famantaranandro tena tsara, miaraka amin'ny famaranana sy fisongadinana lehibe mamela ny rafitra miasa iray manontolo hihetsika tsara. Ary ny zavatra niainan'ny mpampiasa? Raha ny marina, rehefa tonga ilay fitaovana dia niahiahy azy aho. Tena diso fanantenana aho tamin'ny Moto 360 noho ny androm-piainany fohy ary nanantena aho fa tsy hahita hadisoana mitovy ny smartwatch an'i LG. Tsy misy zavatra lavitra amin'ny zava-misy.
Ary aorian'ny fampiasana iray volana dia afaka manome toky aho fa ny LG G Watch R haharitra anao roa andro tsy misy olanaHahatratra telo andro akory aza raha tsy ampiasainao be loatra. Raha heverintsika fa zara raha maharitra iray andro ny Moto 360, ary marina izany, tsy maintsy feno fankasitrahana isika noho io fanatsarana io.
Mazava ho azy, mbola mieritreritra aho fa tsy maintsy manatsara ny teknolojia izy ireo satria, na dia isaky ny roa na telo andro aza, ny fanefana akanjo azo anaovana matetika dia mety hahasosotra. Fa maninona no maharitra maharitra ny batterie LG G Watch R raha oharina amin'ny smartwatch Motorola? ny tsy fahampian'ny sensor mazava.
Motorola dia nisafidy ny hampiditra sensor kely ho an'ny tarehin'ny famantaranandro, hamaky tanteraka ny endriny. LG dia nanapa-kevitra ny hanao raha tsy misy izany, noho izany dia tsy hifehy tena ny famirapiratan'ilay efijery. Izany dia mety hiteraka olana amin'ny fahitana amin'ny fepetra sasany, na izany aza mamela ny famirapiratana hatrany amin'ny 5, misy ambaratonga 6, tsy hanana olana ianao. Nampiasaiko foana io diplaoma io ary nataoko tonga lafatra ny fampisehoana, ankoatry ny bateria maharitra roa andro azo antoka.
Araka ny efa nolazaiko teo, ny fiambenana LG dia tsy mijaly karazana fanemorana, haingana be ny valiny. Inona koa tena tsara ny fanekena ny feo, fahatakarana amin'izao fotoana izao ny ankamaroan'ny baiko.
Ny LG G Watch R dia tsy manana output USB micro ka tsy maintsy mampiasa ny tobim-pandefasana tariby tsy misy heriny ianao izay, amin'ny alàlan'ny tsimatra telo, dia handidy ny fitaovana. Izaho manokana dia tiako kokoa ny rafi-pitantanana ny Moto 360. Ary ny zava-misy tsy maintsy mitondra charger hafa miaraka aminao raha handeha hitsangatsangana ianao dia mbola manelingelina.
Tsy fahampian'ny sensor izay mifehy ny famirapiratan'ilay fitaovana
Ampitahiko foana ny LG G Watch R amin'ny Moto 360 ho an'ny famolavolana boribory natolotry ny akanjo roa. Tamin'io fotoana io nohazavaiko mazava tsara fa misy zavatra tsy ampy an'ny Moto 360 ary nanoro hevitra aho ny hiandrasana ny smartwatches ho avy, izay nodiovina ny lesoka sasany, toy ny fizakan-tena na ny fotoana famaliana.
Raha ny LG G Watch R dia hafa kely ny hevitro. Na dia marina aza fa mbola manelingelina ny famantaranandro famantaranandro isaky ny roa andro, dia avo roa heny ny fahaleovan-tena raha oharina amin'ny famantaranandro Motorola. Azonao vidiana amiko ve ny LG G Watch R? Hiandry am-bolana marim-pototra aho.
Voalohany aloha tokony ho hitanao izay ataon'ny LG tsy ampoizina amintsika. Fantatsika fa amin'ny andiany manaraka amin'ny Mobile World Congress dia hanolotra ny mpamokatra monina any Seoul LG G Watch Urbane, mpikambana manaraka amin'ny sehatry ny Watch.
Currently the LG G Watch R dia mitentina 219 euro eo ho eo ary, raha dinihina ny famoahana tsy ho ela ny mpandimby azy dia azo inoana fa hidina ny vidiny. Ary ny fahitana ny fampisehoana natolotry ity fitaovana ity, ho an'ny 150 euro dia fividianana mahaliana tokoa izany. Na dia, araka ny nolazaiko aza, dia tsy maintsy miandry ny LG G Watch Urbane isika, ary indrindra ny fizakantena hatolotr'ity famantaranandro vaovao ity.
Fa raha tianao ny endriny ary tsy te hiandry ny G Watch Urbane, aza misalasala, ny LG G Watch R tsy handiso fanantenana anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » LG » LG G Watch R, izao no fiheveranay
LG dia mampiseho ny telefaona findainy 4 vaovao ho an'ny elanelam-potoana
Ity no HTC One M9, voasivana ny sary, ny toetra ara-teknika ary ny vidiny